के तपाईंले हृदयको किताब पढ्नुभयो ? – Chitwan Post
पढ्ने अभिरुचि मानिसको एउटा आवश्यकता हो । आवश्यकता किन पनि छ भने गुणस्तरीय जीवनयापन गर्नका लागि यसको महŒवपूर्ण भूमिका छ । जीवनलाई सफल पार्नका लागि हामी पढेलेखेर सफल मानिस बन्दछौँँ । तर, के तपाईँले कहिल्यै आफ्नो हृदयको किताब पढ्नुभयो ? यो किताबको हरेक पानामा स्पष्ट लेखिएको छ ‘तपाईं एकदमै धन्य हुनुहुन्छ ।’ तर, सांसारिक किताबमा ‘तपाईंसँग के–के छैन’ भनेर लेखिएको छ । हृदयको किताबमा लेखिएको छ ‘तपाईंसँग के–के छ ! तपाईँसँग यो श्वास छ, यो जीवन छ अनि तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ ! तपाईंलाई मानिसको शरीर प्राप्त भएको छ ।’ यस किताबमा राम्रो–नराम्रोका बारेमा व्याख्या तथा विश्लेषण गरिएको छैन । तर, यसमा भनिएको छ “जुन चीजको तपाईंलाई वास्तवमा आवश्यकता छ, त्यो पहिलादेखि नै तपाईँभित्र छ ।” यदि त्यसलाई तपाईँले बाहिर खोज्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँ भेटाउन सक्नुहुन्न । हृदयको किताबलाई पढ्नका लागि तपाईँ पढेलेखेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । एउटा अनपढ व्यक्तिले पनि यो किताबलाई पढ्न सक्छ किनकि यसको अक्षर अलि अचम्मको छ जुन हाम्रो भावनासँग सम्बन्धित छ, विचारसँग होइन ।
यो हृदयको किताबको पानामा मूल रूपमा यो लेखिएको छ, ‘यो जिन्दगीलाई आनन्दसँग बिताउनु छ । शान्तिपूर्ण तरिकाले बिताउनु छ । यदि तपाईंले आफ्नो जीवनलाई आनन्द र शान्तिमय ढाँगले बिताउन सुरु गर्नुभयो भने तपाईँ डराउनु पर्दैन । जीवनमा भौँतारिनु पर्ने छैन । जीवनलाई सार्थक बनाउने तरिका के हो भने तपाईंको जीवनमा यस्तो प्रकाश आओस्, जसको आगमनले अँध्यारो हटेर जाओस् ।
हरेक व्यक्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो खुसीको खबर के हो भने “जुन चीजको उसलाई खोजी छ, त्यो ऊभन्दा टाढा छैन, उसको एकदमै निकट छ ।” त्यो वास्तविक शान्ति तपाईँको हृदयमा अवस्थित छ । यो सम्भावनालाई चिन्नुहोस् । तपाईँ त्यो शान्ति र आनन्दको अनुभव गरेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन सक्नुहुन्छ ।
केवल शान्ति–शान्ति भनेर शान्तिको अनुभव हुँदैन । आफ्नो जीवनमा शान्तिको अनुभूति हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ । तसर्थ हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवन सचेत भएर बाँच्नु आवश्यक छ । हृदयको किताबलाई बिर्सनुहुन्न । यहाँ त केवल एक–दुई पन्नाका केही मात्र पङ्क्तिहरूको चर्चा भएको छ । यसमा हरेक चीजका बारेमा लेखिएको छ– आनन्दका बारेमा लेखिएको छ, शान्तिका बारेमा लेखिएको छ अनि यो जीवनलाई सफल बनाउने बारेमा लेखिएको छ । जुन दिन तपाईँ साँच्चै कति धनी हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थ तपाईँलाई अवगत हुनेछ, तपाईँले आफूले आफैँलाई धन्य भएको महसुस गर्नुहुनेछ, तपाईँको जीवन सुखमय बन्नेछ ।
यो भनाइ हो– मानवता र शान्तिका बारेमा चर्चा गर्नुहुने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता प्रेम रावतको । यस कार्यका लागि कैयौँ सरकारी एवम् शैक्षिक संस्थाहरुद्वारा उहाँलाई ‘शान्तिदूत’ को उपाधि प्रदान गरिएको छ । आफ्नो सन्देशको चर्चाका अलावा उहाँले मानिसहरूलाई आत्म–सम्मान, शान्ति र समृद्धिका साथ जीवनयापन गर्नलाई मद्दत गर्ने उद्देश्यले ‘द प्रेम रावत फाउन्डेसन’ नामक एउटा परोपकारी संस्था पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ । यो संस्थाको विभिन्न परियोजनामध्ये एउटा हो – ‘जनभोजन कार्यक्रम’ जसअन्तर्गत आवश्यक पर्ने मानिसहरू तथा बालबालिकाहरुलाई दैनिक पोषणयुक्त भोजन तथा स्वच्छ खाने पानी उपलब्ध गराइन्छ । प्रेम रावत फाउन्डेसनले अन्य ठूला परोपकारी संस्थासँग सहकार्य गरेर विश्वभरि नै प्राकृतिक विपत्तिमा राहत प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग पनि गर्दछ ।
प्रेम रावतको सन्देश www.premrawat.com र www.timelesstoday.tv वेवसाइटहरुमा पनि उपलब्ध छ । प्रतिक्रियाको लागि [email protected]
मस्तिष्क पक्षघातबारे सचेतना